Kazakhstan: Mitolona amin’ny Fiainana sa Miadana? · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Avrily 2018 20:43 GMT
Tsy fanitaran-dresaka ny flazàna fa firenen’ny fifanoherana i Kazakhstan: ny fahantrana fahadiranovana eo anilan’ny harena voajanahary tsy hita pesipesenina, ny fitomboana ara-toekarena miaraka amin'ny fitotongananan'ny sehatra ara-piarahamonina sy ny fihitaran'ny fahefam-panjakana, ary ny fandeferana mifanila amin’ny fanavakavahana. Izany no lohahevitra ifantohan'ny tontolon'ny bilaogy ao Kazakhstan amin'ity herinandro ity.
Manontany tena i Eilide, bilaogera monina any Armenia izay mijery akaiky ny fivoaran-draharaha ao Kazakhstan, raha tena tsara araka ny filazan'ny manampahaizana sasany ao amin’ny fireneny tokoa ny zava-drehetra ao Kazakhstan:
“Mankalaza ny fivoaran’ny andrim-panjakana, ny tsenam-bola ary ny sehatra ara-bola amin'ny ankapobeny izy ireo. Taratry ny firenena manan-karena sy miroborobo. Misy krizy anefa eo amin’ny sehatry ny banky, mbola marefo dia marefo ny tsenam-bola ary tsy dia ahazoana tombony ny petrabola amin’ny fisotroan-dronono. Sa misy zavatra adinoko? ” hoy izy manontany [ru].
Na dia mampiseho faharetana mibaribary aza ny sehatra ara-bola sy ara-banky raha ampitahaina amin'ny firenena hafa ao amin’ny CIS (Commonwealth of Independent States na Fivondronan’ireo Firenena Mahaleo tena), mampitombo ny ahiahin'ireo mpandinika ny fivelaran’ity fanjakana ity, indrindra taorian'ny fanitsiana ny lalàna mifehy ny harena an-kibon’ny tany tamin'ny taona lasa, izay manome ny governemanta zo manokana hanafoana samirery ny fifanarahana atao amin'ireo vahiny mpampiasa vola miasa anatin'ny tontolon'ny fitrandrahana harena voajanahary.
Mampita ny vaovao momba ny vokatr'ilay raharaha nanafintohina mahakasika ny Kashagan i Tuganbaev, Kazakh iray monina ao Moskoa. Raha hampahatsiahivina, tsy faly tamin'ny zava-bitan’ny vondron'orinasa mpamokatra solika izay tokony hampiroborobo ny kianja lehibe dia lehiben’ny Kashagan ao amin'ny tohodranon'i Caspian ny governemanta Kazakh ary nandrahona ny hampihatra ny lalàna vaovao raha tsy manaraka ny fepetran’ny fifanarahana izy ireo.
“Niafara tamin’ny fandresen'i Kazakhstan ny firesahana natao nandritra ny tapa-taona. Ho lasa mpandray anjara lehibe indrindra anatin'ilay tetikasa ny KMG tantanan'ny fanjakana noho ny fitombon’ny fizarany avo roa eny. Hahazo 16,81 isan-jato izao ny fanjakana, ary nanaiky ny hampidina ny anjarany amin’ny fizarana ho 16,6 isan-jato kosa ireo mpikambana hafa ao amin'ny vondron'orinasa raha 18,5 isan-jato izany teo aloha [ru]”.
Milaza i Strannik-kz fa nitombo be ny fahefan'ny fanjakana taorian'io fifanarahana io. Nanohitra mafy ny hanomezana ny anjarany ho an'i Kazakhstan ny Mobil Oil, mpandray anjara lehibe hafa avy amin'ny fiombonana Kashagan. Nizara ny ahiahin'ny Mobil ny Chevron, orinasa amerikana iray hafa mitondra ny anjara birikiny amin'ny fampiroboroboana orinasa fametrahana solika sy entona roa lehibe antsoina hoe Tengiz sy Karachaganak, tany amin'ilay fihaonana farany niarahana tamin'ireo manampahefana ao amin'ny governemanta ary … nasaina nivoaka ny efitrano noho ny “tsy fanajàny ny fitantanana ambony ao amin'ny KMG ” [ru].
Kanefa, tsy hentitra be toy izany ny fanjakana amin’ilay mpamatsy vola lehibe iray hafa malaza anatin'ny indostrian'ny arintany — dia ilay Arcelor Mittal fanta-daza. Saika mpitrandraka 30 teo ho eo no voatototry ny tany tao amin'ny toeram-pitrandrahana arintany ny herinandro lasa teo. Tsy vao voalohany izy ity no nitranga, hoy dansanat, manamarika amin’ny alahelo fa “raha lehilahy iray no maty dia loza izany. Raha am-polony no maty, dia antontanisa fotsiny [ru]”. Saingy tsy vitan’ny fanjakana ny nanao ireo dingana tokony narahina tamin'ny fanadihadiana ireo tranga ireo. Tamin'ity indray mitoraka ity, nisy fipoahana iray indray namono olona, saingy tsy navela niditra tao amin'ilay toerana ireo mpanao gazety sy mpikatroka mafana fo sivily. Nanambara i Mantrov-kz fa tsy azo atao ny manisy sakana ny fampahalalam-baovao:
“Tsy maintsy ny mpanao gazety ihany no mandrakotra ny zava-mitranga, fa tsy mamerina ny tenin'ireo manampahefana.” Liana amin'ny tsy fahampian'ny fampahalalam-baovao ilay miliaridera Mittal, satria mety hanimba ny fahitan’ny olona ny orinasany izany. Tsy dia tia ny fijery tsy miangatra ihany koa ny fanjakana satria tompon’andraikitra amin’ny fiarovana ny olompireneny izy. Ny haino amanjery ihany no loharanom-baovao tena ilaina ho an'ny fianakavian'ireo mpitrandraka, saingy voasivana tanteraka indray izany “[ru].
Ankoatra izay, raha manjelatra amin'ny fanjopika sy ny voninahitra entin'ny vola azo avy amin'ny solika i Astana (renivohitra) sy Almaty (renivohitra ara-barotra) ary Atyrau (renivohi-tsolika tsy ara-panjakana), ny faritra ambanivohitra kosa sempotry ny fahantrana fadiranovana. Mizara tantara roa mampiseho ny fomba iainan'ny olona any amin'ireo lemaka Kazakh tsy misy sisintany, tsy manana fanantenana ho anà fiainana tsaratsara kokoa, i Scaliger:
“Efa tafaresaka izany ihany, tsy dia zava-baovao ho an'i Kazakhstan ny tantara toy izao, fa io no voalohany hitan’ny mason'ny vahoaka. Tokana ihany ny fitsipika izay miasa any amin'ireo tanàna lavitra sy mitoka-monina, izay namelàna ny mponina ho irery – dia ny fitsipiky ny “Amboa mihinana amboa”.
5 andro izayArmenia